NVIDIA GeForce Iye zvino: ikozvino unogona zvakare kuishandisa pane Chromebook | Linux Vakapindwa muropa
Isaac | | Linux Mitambo, Noticias, Resources
Kusvikira kanguva kapfuura, iyo yekutamba yevhidhiyo mutambo webasa NVIDIA GeForce Zvino Yaingowanikwa chete kuMicrosoft Windows chikuva, Apple macOS, Android, uye zvakare yeNVIDIA Shield yayo, Android TV bhokisi rekutamba iro rine giraidhi kambani. Naizvozvo, zvaive zvisingaite kuti uishandise kubva kune yako GNU / Linux distro, uye zvinoita sekunge havana hanya nazvo chero ...
Nhau dzakanaka ndedzekuti NVIDIA yakatangawo rutsigiro kune avo vane system yekushandisa ChromeOS pane Chromebook. Kunyangwe isiri ye generic Linux distros, asi zvirinani Google chikuva chinowedzerwawo kune runyorwa rwevashandisi vanozogona kubatsirwa kubva ino yemitambo chikuva.
Kana iwe uri mushandisi weiyo ChromeOS inoshanda sisitimu inoenderana neLinux kernel, iwe unofanirwa kuziva iyo zvitsva zvinodiwa iyo NVIDIA inoda kushanda pasi peiyi chikuva. Kana iwe ukasateedzera, haugone kumhanyisa iyo GeForce Now software mutengi iyo iwe yaunoda kutanga kunakidzwa neshumiro uye yayo yevhidhiyo mutambo katarogu.
Sayings zvinodiwa Ndizvo:
Chromebook ine ChromeOS 77.x kana yepamusoro sisitimu yekushandisa.
USB kana Bluetooth keyboard uye mbeva / Microsoft Xbox 360, One, One S, Sony PlayStation DualShock 4, kana Logitech F710 vatongi vemitambo muDirectInput modhi.
Indaneti inobatanidza ingangoita 15MB / s yezvisarudzo zve 720p @ 60FPS paGeForce Iye zvino, kana 25 Mb / s yezvisarudzo zve 1080p pa60FPS. Zvikasadaro, lag inogona kukanganisa mutambo wako.
3th Gen Intel Core M7, Core i3, Core i5 kana Core i7
Intel HD 600 kana kupfuura
4 GB ye RAM kana kupfuura
Nekudaro, sekureva kwemishumo kubva kuNVIDIA, sevhisi ichiri Chikamu chekuyedza uye vanoshanda kuti zviitwe kuti zvishande nemazvo pamaChannelbook. Asi kazhinji hapafanire kuve nezvinetso.
Kana iwe uchifarira, unogona dhawunirodha mutengi izvozvi NVIDIA GeForce Zvino kubva iyo yepamutemo NVIDIA webhusaiti.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » NVIDIA GeForce Iye zvino: ikozvino unogona zvakare kuishandisa pane Chromebook